Waxay u eg yihiin geed cusub oo lagu beeray durdurrada biyaha, kaas oo midhihiisa bixiya wakhtigiisa, oo dhalaalkiisuna ma engegaan » (Sabuurradii 1: 3),
Inta badan tarjumaadaha Sabuurrada 1: 3 waxay adeegsadaan ereyga "la beeray". Si kastaba ha noqotee, ereyga "dhowaan la beeray" waxaa loo isticmaalaa Kitaabka Quduuska ah ee Wadajirka ah. Fikradda ayaa ah in kuwa ku raaxaysta tilmaamaha Eebbe u dhaqmaan sidii koox ama shaqsi ahaanba sidii geed oo dib loo aasaasay. Tarjumaadda Ingiriisiga "Farriinta" waxay u sharraxaysaa sidan: "Waa geed cusub oo lagu dhex beeray Ceeden, kaas oo bil kasta keena miro cusub, oo aan caleemo weligood engegin oo had iyo goorba ubax leh".
Qoraalka asalka ah ee Cibraaniga waxaa ku jira falka «schatal», oo macnaheedu yahay «geli», «transplanted». Si kale haddii loo dhigo, geedka waxaa looga dhaqaaqay meeshii uu markii hore ku jiray oo wuxuu u dhaqaaqay goob cusub si uu ubaxyo cusub ubaxyo u yeesho oo uu miro badan u keeno. Waxay maskaxda ku haysaa waxa Masiixu ku yidhi Yooxanaa 15:16: "Adigu ima dooran, laakiin waan ku doortay oo waxaan go'aansaday inaad tagto oo midho dhalatid oo aad midhahaaga sii haysatid."
Isbarbar dhig waa cajiib. Ciise wuxuu noo doortay bacrin. Laakiin si aynnu u korayno, waxay ahayd in naloogu dhaqaaqo xagga ruuxa. Bawlos wuxuu qaatay fikradan isagoo ku dhawaaqaya in rumaystayaashu midho dhalaan maxaa yeelay waxay ku nool yihiin kuna dhex socdaan ruuxa ay ku aasaaseen. "Sidaad Masiixa u aqbasheen Rabbi Ciise Masiix, ku socda isaga, aasaaska oo aad wax dhisid ku dhisteen, oo waxaad ku xoogaysateen xagga rumaysadka, sidii laydin baray inaad barako ku mahadisaan" (Kolosay 2: 7).